Ma dooneysaa inaad wax ka ogaato maqaarinta? - Weydii Khabiirka Cimilada, Natalia Khachaturyan
Dibudhisidda maqaal asal ah oo ka badan laba boqol jeer oo isku dayaya in la abuuro nuqullo asli ah oo asli ah waxay horseedi karaan dib-u-sameynta content. In adduunka raadinta mashiinka raadinta (SEO), bixinta iyo soo dhajinta content cusub boggaaga si joogto ah waa mid muhiim ah. Bixinta iyo daabacaadda waxyaabaha ku qoran bogga internetka ee e-commerce waxay kaa caawineysaa inaad soo jiidato dareenka booqdayaasha iman kara oo ku garaacaya bartilmaameedkaaga waqtiga dhabta ah
Istaraatiijiga Miisaanka Nabadaynta Khachaturyan, ayaa sheegaysa in shabakadaha websadaha sida Google sida loo isticmaalo qaar ka mid ah qodobbada lagu darajin karo boggaaga ku yaal algorithms, ereygaaga isbeddelka ah ee noqoshada mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah. Sida badeeco content ah, ma rabto inaad fahantid keydkaaga isbedelka si aad ugu ordaoto hooseeya algorithms search engine. Abuurista muuqaalka internetka wuxuu xoojiyaa feejignaanta iyo hal-abuurka - lawyer in bethlehem pa.
Maxay tahay maqaalku?
Abuuritaanka noocyo kala duwan oo ka mid ah maqaal si aad u darajo sare ee algorithms ka dhigi kartaa ololaha SEO aad. Sida laga soo xigtay khabiirada raadinta mashiinka raadinta, khadka daabacaadda waa farsamo khad madow SEO ah, oo sida badan loo isticmaalo sidii loo soo gaabin karo dadka dijitaalka ah iyo kuwa suuqa. Dareenka dhabta ah, abuuritaanka maaddooyinka adoo adeegsanaya maskaxdaada waxay ku dhamaaneysaa waqti la qaato marka la barbardhigo qoraalka hadda jira.
Ahaanshaha hal abuurka ma aha ikhtiyaar marka ay timaado hagaajinta aragtidaada ganacsi. Markaad foorariso maqaal, qodobka dhameeyaa natiijada ma aha inuu macno samaynayo. Isku day inaad ku celiso ereygaaga marar badan waxay natiijooyinka udub dhexaad u tahay. Google waxay leedahay hab lagu aqoonsado qodobbada muhiimka ah iyo daabacaadda qoraalka..
Ku soo dhajinta content ku wareegsan boggaaga WordPress ayaa burburin kara hawlahaaga firfircoon. Haddii aad sii wado dirista kudubka boggaaga, martidaada martidaada waxay ku dambeyneysaa in aad riixdid bogaggaaga, taas oo horseedi doonta muddada fadhiga oo hooseeya iyo heerarka sare u kacda. Heerarka ugu badan ee ku soo boodaya maaha mid ku haboon ganacsiyada internetka, waxayna u horseedi kartaa hoos u dhac aad u sarreeya oo ku qoran darajada muhiimka ah ee isbarbar dhigga ah maaddaama erayga muhiimka ah loo tixgelinaayo mid aan ku habboonayn makiinadaha raadinta.
Abuuritaanka boqolaal ama kumanaan qaybood oo isla hal qodob ah ayaa noqon kara wax yar. Tani waa meesha qoraalka daabacaadda ee daabacaadda. Qodobbada daabacan waxay kaa dhigi kartaa inaad ku sarayso algorithms waqtiga dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, maqaallada ay soo saartey maqaalkii maqaalku waa mid aad u adag in la akhriyo sababtoo ah soo uruurinta ereyada iyo odhaahyada gaarka ah
Qodobka daabacan ma soo bandhigaan natiijooyinka?
Qoraalka daabaca waa mid ka mid ah miisaannada la isku halayn karo oo ka dhigan kara ereyga muhiimka ah ee isbedelka ku jira waqti gaaban. Si kastaba ha noqotee, hagaajinta muuqaalka boggagaaga iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka madow ee SEO-ka ah waa istiraatiijiyad gaaban oo soo afjari doonta ololahaaga mustaqbalka.
Ujeeddada ugu muhiimsan ee daabacaadda maqaalku waa inuu abuuro boggaga ku saabsan mowduuca isla xiisaha sida nuqul asalka ah. Ka dib markii la abuurayo macmiilka, suuqyeyaal dijital ah waxay ku dhamaanayaan backlinks si ay goobahooda ku dhex jiraan mawduucyada la soo saaray. Dhanka dheer, xiriirrada ayaa tilmaamaya in ay raadinayaan matoorada in ay caan ku yihiin oo caan ah oo soo afjaraya si ay u riixaan goobahooda si ay uga sii fiicnaadaan arimaha ku saabsan liiska.
Abuuritaanka maadada tayada wanaagsan ee qoraalka isku mid ah waxay noqon kartaa mid xoogan. Sida badeeco, waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho maqaal bixiye si aad u abuurto nuqullo badan oo ka mid ah dukumiintiga asalka ah. Si kastaba ha ahaatee, Google ayaa had iyo jeer ciqaabi doona content spun. Ka fikir inaad codsatid farsamooyin khadad cad oo SEO ah si aad u hesho xal waqti dheer ah ololehaaga internetka.